चार घण्टामै तयार हुन्छ यो ट्रक
सामान्यतः एउटा ट्रक तयार हुन कमसेकम ३/४ दिन लाग्छ । तर एक ब्रिटिश कम्पनीले ४ घण्टामै ट्रक तयार गर्न थालेको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यो ट्रक ४ घण्टामा एक ब्यक्तिले मात्र एसेम्बल गर्छ । यसरी ट्रक तयार गर्ने कम्पनीको नाम चार्ज हो । चार्जले...
आउदैछ हावामा उड्ने कार
स्लोभाकियाको कम्पनी एरोमोबिलले हावामा उड्ने कार अर्थात एयर कार ल्याएको छ । कम्पनीले अप्रिल २० देखि प्रदर्शनमा रहेको मोनाकोको मार्की शोमा उक्त कार प्रदर्शन गरेको छ । यो इन्टिग्रेटेड एयर कार हो । जमिनमा चल्नका लागि यसका चार वटा पांग्रा छन् र आका...
१० जना बस्न मिल्ने बाइक
एउटा बाइकमा कतिजना वस्न सक्छन् ? दुइ, तीन या धेरैमा पाँच । यद्यपि एकसाथ १० जना वस्न सक्ने बाइक पनि प्रचलनमा छ । वस्न मात्र होइन, यसमा १० जना आरामले वसेर कुदाउन सकिन्छ । दुइ एवं एक सिटयुक्त बाइक देखिरहेका हामीलाई उक्त १० सिट क्षमताको बाइक नौलो लाग्न स...
डबल डेकर केबुलकार
स्वीट्जरल्यान्डमा डबल डेकर केबुलकार निर्माण भएको छ । लुसर्न सहरको नजिकमा निर्माण भएको यो विश्वकै पहिलो डबल डेकर केबुलकार भएको दावी गरिएको छ । ‘क्रिस्टिन द क्याब्रिओ’ नाम गरेको यो केबुलकारले १ दशमलव ९ किलोमिटरको दुरी पार गर्छ । यसमा एक पटकमा ६० यात्रु...
जिप भन्दा महंगो साईकल
एजेन्सी । फ्रेन्च कार निर्माता कम्पनी बुगाटीले निर्माण गरेको साईकल जिप भन्दा महंगो रहेको छ । विश्वमै तिब्र गतिमा गुड्ने कार निर्माण गर्ने बुगाटीले विश्वकै हलुंगो साईकल निर्माण गरेर सवारी साधनको क्षेत्रमा नयाँ चर्चा सिर्जना गरेको छ । ९५ प्रतिशत रेनफोर...
ट्रम्पको कार सस्तोमा विक्यो
एजेन्सी । वर्तमान् अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तुलनात्मक रुपमा बढी विवादमा आउने निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको रुपमा चिनिन्छन् । उनले गरेको स्वदेश भित्र र विदेशी कुटनीतिका निर्णयहरु आलोचनाको बिषय हुने गरेको छ । यसैक्रममा हालै डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्न...
कहिल्यै दुर्घटनामा नपरेको रेसिङ कार लिलाम
एजेन्सी । अमेरिकामा सन् १९५६ मा निर्माण भएको फरारी रेसिङ कारको उच्च मुल्यमा हालै लिलाम बिक्रि सम्पन्न भएको छ । फरारीले सन् १९५६ मा २९० एमएम कार केबल ४ वटा मात्र निर्माण गरेको थियो । जसमा यो कारले सन् १९६४ सम्म भएका विभिन्न कार रेसिङ प्रतियोगित...
१ लिटर पानीले ५ सय किमि चल्ने वाइक
– एजेन्सी ब्राजीलका एक ब्यक्तिले एक लिटर पानीले ५ सय किलोमिटर गुड्ने बाइकको निर्माण गरेका छन् । ब्राजीलमा पब्लिक अफिसरको रुपमा कार्यरत रिकार्डो अजेबेडोले यो वाइकको निर्माण गरेका हुन् । संचारमाध्यमहरुका अनुसार ‘टि पावर एच टु ओ’ नामाकरण गरिएको यो वाइकम...
बाहुबली हिरो प्रभास चढ्छन् १३ करोडको कार
एजेन्सी – बाहुबली र प्रभास एक अर्काका परिपुरक बनेका छन् । फिल्मसँगै यसका नायक प्रभासको पनि निकै नै चर्चा छ । तर के तपाईंलाई थाहा छ ? प्रभास कुन गाडी चढ्छन् ? हो, प्रभासको गाडी पनि उनी जत्तिकै चर्चित छ । प्रभासले रोल्स रोयस फ्यान्टोम कार चढ्छन्...
भारतीय व्यापारीले किने ९६ करोडमा नम्बर प्लेट
एजेन्सी – भारतीय व्यवसायी बलविन्दर सिंहले आफ्नो रोल्स रोयस कारका लागि ९६ करोड रुपैयाँमा नम्बर प्लेट खरिद गरेका छन् । उनले डी ५ लेखिएको नम्बर प्लेटका लागि त्यति धेरै रुपैयाँ तिरेका हुन् । दुबईमा रहेका उनले खरिद गरेको यो रकमबाट १५ भन्दा धेरै रोल्स रोयस...
बुलेट मन्दिर : जहाँ बुलेट बाइकको पूजा हुन्छ
एजेन्सी – भारतको राजस्थानस्थित पाली क्षेत्रको एउटा मन्दिरमा भगवानको होइन, बुलेट बाइकको पूजा हुन्छ । उक्त मन्दिरमा लड्डुको साटो रक्सी चढाइन्छ । सो मन्दिरमा पूजा गरेपछि दुर्घटना हुँदैन र त्यहाँको बाबाले उनीहरुको रक्षा गर्नेछन् भन्ने मानिसहरुको विश्वास...
गर्लफ्रेन्डले हार्ले डेभिडसन दिएपछि
गर्लफ्रेन्डले ब्वाइफ्रेन्डलाई उपहारमा के दिन्छ होला ? टिसर्ट, घडी, मोवाइल, ल्यापटप । तपाईको अनुमान त्यसवेला गलत ठहर्छ, जतिवेला भारतका एक प्रेमिल जोडीको कथा थाहा पाउनुहुनेछ । प्रसंग हो, दिल्लीको । एक गर्लफ्रेन्डले आफ्ना ब्वाइफ्रेन्डलाई उपहारमा ‘हार्ले...
यस्तो छ सलमानको सानदार वस
बलिउडमा सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने अभिनेतामा गनिन्छन्, सलमान खान । उनले एक फिल्म वरावर भारु ४० करोड रुपैयाँ भन्दा लिने गरेका छन् । अविवाहित सलमान विज्ञापनवाट पनि उत्तिकै पैसा वटुल्छन् । यतिका महंगो अभिनेताले कस्ता गाडी चढ्लान् ? चासो हुनु स्वभाविक हो ।...
अमेरिकाको हाइवे टनेल
निजी घर वा ग्यारेजजस्तै देखिए पनि यो उत्तर अमेरिकाको सर्वाधिक लामो ‘हाइवे टनेल’ हो । अमेरिकाको अलास्का राज्यको पोर्टेज ग्लेसियर नजिक रहेको यसलाई ‘एन्टोन एन्डरसन मेमोरियल टनेल’ हो । सामान्य रुपमा यसलाई ‘ह्विटियर टनेल’ पनि भनिन्छ । यसले ह्टिियरको पोर्ट...
विएमडब्ल्युको एक्सक्लुसिभ बाइक
विएमडब्ल्युको एक्सक्लुसिभ बाइकको वारेमा कमैलाई थाहा होला । यसको पुरा नाम हो, विएमडब्ल्यु के–१६०० जिटिएल एक्सक्लुसिभ । यात्राको सौखिनहरुका निम्ति यो बाइक राम्रो विकल्प हुनसक्छ । यसको लुक्स पूर्णतः टुरिङ वाइकको रुपमा देखिन्छ । यसको आवरण निकै आकर...
सय वर्ष पुरानो कारको रोचक इतिहास
विश्वमा अहिलेपनि यस्ता कार कम्पनी छन्, जसको इतिहास १ सय वर्ष पुरानो छ । यी मध्ये केहि कम्पनी ठूलो व्रान्डको रुपमा स्थापित छन् । मर्सिडिज वेन्ज १८८३ मा निर्माण गरिएको थियो । हेनरी फोर्डले अटो कम्पनी फोर्ड १९०३ मा वनाउन सुरु गरेको थियो । लक्जरी कार रोल...